မောင်တောကို မီးရှို့နေပြီ (ယခု) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Members » မောင်တောကို မီးရှို့နေပြီ (ယခု)
မောင်တောကို မီးရှို့နေပြီ (ယခု)
Posted by Davit on Jun 8, 2012 in Members | 141 comments
Eleven Media Group မှကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်…
မောင်တောမြို့တော်ခန်းမ အနီးရှိအိမ်များကို ဘင်္ဂါလီများက လူအုပ်စုဖြင့် မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေသဖြင့် ဒေသခံများ ထွက်ပြေးနေရ၊ အခြေအနေကို အလျင်အမြန် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် လိုအပ်နေ
မောင်တောမြို့တော်ခန်းမ အနီရှိအိမ်များကို ဘင်္ဂါလီများက လူအုပ်စုဖြင့် မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေသဖြင့် ဒေသခံများ ထွက်ပြေးနေရကြောင်းနှင့် လက်ရှိ ဆိုးရွားနေသော အခြေအနေကို အလျင်အမြန်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် လိုအပ်နေကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သတင်းရရှိပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်တွင် လူထောင်ချီရှိသော ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများမှ မြို့တော်ခန်းမအနီရှိ အိမ်များကို ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှ စ၍ မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေပြီး ဒေသခံ အများစုက မိမိအိမ်နှင့် ဝေးရာသို့ ထွက်ပြေးနေရကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရသော အိမ်များအနက် မောင်တောမြို့ ရွာသစ်ရပ်ကွက်ရှိ Weekly Eleven News Journal သတင်းထောက်၏ နေအိမ်လည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရသည်။ မောင်တောမြို့လုံခြုံရေးကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ယူပြီး အင်အား ၂၀၀ ၀န်ကျင်ခန့်သာရှိကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ ထိန်သိမ်းရန် ခက်ခဲသော အခြေအနေ ရှိနေကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးမှ ပြောကြားပါသည်။
Davit. Chelsea has written 19 post in this Website..
အပျော်တမ်း Show မှာဆိုရင် Drum တီးတယ်၊ One Men မှာဆိုရင် ကီးဘုတ်တီးတယ်၊ အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းပျင်းရင် Guitar တီးတယ်။ တီးလို့ရတာအကုန်တီးသဗျို့....နားထောင်ကောင်း၊ မကောင်းတော့ နားထောင်တဲ့သူသမိုင်း၊ တီးတာကတော့ ကိုယ့်သမိုင်း....ဟေ.....ဟေ့.....မမိုက်လား..... (တစ်ကယ်တော့ ဟုတ်တိပါတ်တိ ဘာမှရဘူးရယ်)
View all posts by Davit →
တနိုင်ငံလုံးပါဝင်ပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေကိုမောင်းထုတ်သင့်နေပါပြီ။ ရခိုင်ဒေသက မြန်မာတိုင်းရင်းသား ရခိုင်များ အရေး အတွက် လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို အရေးယူဖို့လိုပါပြီ။ စစ်တပ်ကပိုင်တဲ့ လေယာဉ်တွေ၊ အမြောက်တွေ ၊ တင့်ကားတွေ၊ ခေတ်မှီလက်နက်တွေ ဘာလုပ်ဖို့ သိမ်းထားနေလဲ … ရိုဟင်ဂျာတွေ အမြစ်ပြုတ်အောင်သတ်ဖို့ အချိန်ရောက်နေပြီလေ.. ဦးစီချုပ်ရော ဘာတွေတွေဝေနေလဲ ဘယ်သူ့အမိန့်မှမရလဲ ချပါတော့.. ရခိုင်ပြည်သားတွေနစ်နာလှပါပြီ။
ရွှေ မင်း သား says:
ရခိုင် ဒေသတွင်းရှိ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများရဲ့ လုံခြုံရေးကို တွေ ပြီး စိတ်ပူမိပါတယ်။
ထို့ အတူ ရခိုင် ပြည်သူပြည်သား တွေ ခံစားနေရသော လုံခြုံမှု အတွက် ပူပင် နေရခြင်း၊ မိသားစု လုံခြုံရေး၊ စားဝတ်နေရေး အတွက် ကြောက်လန့်နေရခြင်း၊ ဘယ်လောက်တောင် ပူပင် သောကတွေ ဖြစ်နေလိုက်မလဲ ဆိုတာ တွေးကြည့်ရုံ နဲ့ ရင်မော နေပါပြီ။ နောက်ပြီး အခု ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေ အားလုံးဟာ အမုန်းတရားတွေ နဲ့ အတူ သမိုင်းမှာ ကျန်ရစ်နေတော့မှာပါ။ နောက် မျိုးဆက်တွေ အထိ ဒီ အမုန်းတရားတွေ ရှိနေတော့မယ်လို့လဲ ထင်မိပါတယ်။ ဒီအခြေနေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အထက်လူကြီး အရာရှိတွေ အဖို့ အရမ်းတာဝန်ကြီးပါတယ်။ အခုလတ်တလော ကိစ္စ ရှင်းသွားရင် ပြီးရော ဆိုတာ မျိုးနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ လဲ မဖြစ်၊ အမုန်းတရားတွေ ကိုပါ လျှော့ ပါးသွားအောင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်မိပါတယ်။ နောက်ပြီး ဟို သပုန် သောင်းကျမ်းတာပါ၊ ဒီ အဖွဲ အစည်း သောင်းကျန်းတာပါ ဆိုပြီး အလွယ်တကူ လက်ညှိုးထိုး ဖြေရှင်း ရုံ ဆိုရင် တော့ ကိစ္စတော့ အလွယ်တကူ ပြီးသွားနိုင်ပေမယ့် အမုန်းတရားတွေ တော့ ကျန်ရှိနေတော့မယ် လို့ တွေးပူ မိပါတယ်။
ရန်ကုန် ၊ မိတ္ထီလာ လေတပ် နှင့် စစ်တွေ ရေတပ် မောင်တော သို့ထွက်ခွာ (LIVE)
by FNG on June 9, 2012
မောင်တော မြို့ နယ် တွင်း ရှိ လက်နက် ကိုင် အကြမ်းဖက် ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာများ အား ရှင်းလင်းရန် အလို့ ငှာ မြန်မာ့ တပ်မတော် လေတပ် နှင့် စစ်တွေ ရှိ ရေတပ် များ မှ မောင်တော မြို့ သို့စတင် ထွက် ခွာ လျှက် ရှိ သည်။ ဘူးသီးတောင် ၊ ရသေ့တောင် နှင့် စစ်တွေ အခြေစိုက် တပ် များ မှ ယနေ့ ည ၁၀ နာရီ တွင် မောင်တော မြို့တွင်း သို့ဝင်ရောက်လာရာ တစ်ဖက် နိုင်ငံ မှ AK – 47 , ပခုံးထမ်း လောင် ချာ စသည့် လက်နက် များ တပ် ဆင် ထား သည့် အကြမ်းဖက် ရိုဟင်ဂျာများ နှင့် ထိတွေ့ မှု ဖြစ်ပွား ပြီး နောက် ပိတ်မိနေသည့် ရွာများ မှ ဒေသခံ အချို့ကယ် ထုတ် နိုင် ခဲ့ သည်။ ည ၁၁ နာရီ ကျော် အချိန် တွင် လက်နက် ကိုင် ဆောင် ထား သည့် ရိုဟင်ဂျာများ က ဝေသာလီ ကျေးရွာ ကို မီးရှို့ ဖျက် ဆီး သွား ရာ နေ့ လည် ၂ နာရီ အချိန် မှ စပြီး မီးရှို့ ဖျက်ဆီး ခံရသည့် ရွာ များ အနက် ၁၆ ရွာ မြောက် ကျေးရွာ ဖြစ်နိုင် သည် ဟု စစ်တွေ မြို့မှ အလွတ် သတင်း ထောက် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဦးအောင် မော် က FNG သို့ပြောသည်။ တစ်ဖက် နိုင်ငံ တွင် အခြေစိုက် သည့် ရိုဟင်ဂျာ လက်နက် ကိုင် များ မှာ ည ၈ နာရီ ကျော် အချိန် တွင် နယ် စပ် ကို ဖြတ် ကျော် ပြီး ကြိမ်ချောင်း အပိုင် လောင်ဒုံ ရဲစခန်း ကို ပိတ် ဆို့ ထား ကာ ခရေ မြိုင် ၊ ရွှေရင် အေး အစရှိသည့် ရွာများ ကိုလည်း မီး ရှို့ ဖျက် ဆီး ခဲ့ သည် ဟု သတင်း ရရှိသည်။ ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက် သမား များ ၏ အကြမ်းဖက် မှု ကြောင့် ရွာများစွာ ပျက် စီးသွား ပြီး အမျိုးသမီး နှင့် ကလေး ငယ်များ သေဆုံးသည် ဟု စစ်တွေ ဆေးရုံကြီးမှ ကျန်းမာရေး ၀န် ထမ်း တစ်ဦး က ပြောသည်။ မောင်တောမြို့ပြင် ကားလမ်းတစ်နေရာ ကညင်တန်းတွင် ဘင်္ဂလီRSOပျောက်ကျားများနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံလျက်ရှိပြီး လက်နက်ကိုင် RSO စစ်တကောင်းမှဘင်္ဂလီဦးရေတစ်ရာဝန်းကျင်ခန့်နှင့် ဒေသတွင်း ဘင်္ဂလီများပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် စစ်သွေးကြွများ အကျအဆုံး များကြောင်း သိရှိရသည်။ ရေချမ်းပြင်မှ မြန်မာ့တပ်မတော်နေဗီဘုတ်နှစ်စီးထပ်မံလိုက်လာကြောင်း သိရှိရသည်။ ဆက်လက် တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းသည့် သတင်း များ ကို အချိန် နှင့် တပြေးညီ ဖော်ပြ သွား ပါမည်။
မောင်တော မှာ ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီ တွေ အကြမ်းဖက် မှုကြောင့် သေဆုံးသူ တစ်ရာ ကျော်ရှိ
by FNG on June 8, 2012
source from http://www.yeyintnge.com/2012/06/live.html
နယ်မြေကျုးကျော် အကြမ်းဖက် ၊နိုင်ငံအေးချမ်းတည်ငြိမ်ရေး
သေစမ်းကုလားတွေ ဒါများသူတို့က ဒို့တိုင်းရင်းသားလို့ပြောချင်သေးတယ်။ အကုန်သာ သတ်ပစ်လိုက်ပါ
တော့ ။ မုန်းလွန်းလို့ တကယ်။ အော်…ဒါနဲ့ ဂေဇက်ကတကယ်လို့များ..ရခိုင်ရွာတွေပြန်လည်တည်ဆောက်
ရေး အတွက်အလှူများပေးမဲ့သူရှိရင်ပေါ့လေ ဦးဆောင်ပြီးလုပ်ပေးမဲ့သူရှိရင်ပေါ့ မေဖလားဝါးလဲ ငါးသောင်း
may flowers ရေ
ဟိုဘက် Post မှာတော့ လူစုနေ စည်းဝေးနေကြပြီ ။
” ဘဖောနှင့် ရွာသူားများသို့ ”
ဗိုလ်စံ ဖဲ says:
အမုန်းတွေ၊ အာဃာသတွေနဲ့ အရှည်တွေမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။
Lwin Aung says:
Yangon’s Muslim societies should apologize to Daw Aung San Su Kyi for their muslim’s terrorist activities. And should go to Mawtow givingaspeech for peace.
နိုင်ငံခြားက မြန်မာပြည်ထဲခိုးဝင်သူတွေနဲ့.. မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေကို ခွဲခြားမြင်ကြဖို့လိုမယ်ထင်မိတယ်..
ဒီလိုပြဿနာက.. မြန်မာတပြည်ထဲမှမဟုတ်.. ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများ.. ခံစားနေရတာပါ..
မြန်မာပြည်က လူတွေခိုးဝင်တာလည်း.. ထိုင်းကခံစားနေရပါတယ်..။
ယူအက်စ်ဆိုရင်လည်း.. မက်ဟီကိုက.. ခိုးဝင်သူတွေနေ့စဉ်ရာချီ..ထောင်ချီနဲ့.. အခုပြည်တွင်းမှာ.. ခိုးဝင်ပြီးရောက်နေသူ.. ၁၁သန်း.. (၁၁သန်း) ရှိနေတယ်..
မြန်မာပြည်မှမွေးတဲ့.. မြန်မာတိုင်း …ဒါကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလည်း.. စုစည်းစဉ်းစားကြဖို့ပါပဲ..
Illegal immigration to the United States – Wikipedia, the free …
The illegal immigrant population of the United States in 2008 was estimated by the Center for Immigration Studies to be about 11 million people, down from 12.5 …
သူခိုး နိုင်ငံသားတွေထဲမှာ ဒီသောက် လဗျွတ်သွေးကြွကောင်တွေလောက် ဘယ်သူမှ အစွန်းမရောက်ဘူး သဂျီး
WTC ကို ဖြိုသွားတာပဲ ကြည့်.ပြီးတော့..
ခိုးဝင်မှတော့ အနဲဆုံး အနှိမ်ခံရမှာပဲ
တစ်ကယ့်နိုင်ငံသားလောက် အခွင့်အရေး တန်းတူမပေးတာ တရားပါတယ်..
မကျေနပ်ရင် ကိုယ့်အထုတ် ကိုယ်ပြန်ဆွဲပြီး ဒိုးကြ
ကိုယ့်မေလင်ဆီမှာတောင် သဒေါင်းစားလို နေရလို့ပထွေးဆီ ထွက်ပြေးတာ
ပထွေးနိုင်ငံက ပထွေးနိုင်ငံပီပီပဲ ချစ်နိုင်မယ်..အခွင့်အရေးပေးနိုင်မယ်.
ပြည်ပရောက် ကိုယ့်လူမျိုးတွေကို မစာနာလို့ မဟုတ်ဘူးနောာ..
ကျုပ်တို့ လူမျိုးတွေက သနားတတ်၊စာနာတတ်၊တော်ပြီးတတ်ပြီးသား လူလိုနားလည်တဲ့လူတွေ..ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် လူရာသွင်းခံရမှာကျိန်းသေတယ်ဆိုတာ ယုံပြီးသား.
ငပြိန်း စာမတတ်တဲ့ အစွန်းရောက်တွေကြောင့် လူလိုနားလည်တဲ့သူတွေပါ ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပဲ စိုးတာပါ…
နယ်စပ်စည်းရိူးကို.. သေသေချာချာလုပ်.. အမြင့်၁၅ပေ.. ဘတ်ဝါယာကာ.. မီးစလိုက်နဲ့. စနှိုက်ပါနဲ့…စောင့်နေ..
နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေချ.. ၀င်လာရင်..ပစ်.. ဖမ်း..
ဒဏ်ငွေဆောင်ခိုင်း.. မရှိရင်.. ကန်မ့်သွင်းအလုပ်လုပ်ခိုင်း.. ငွေပြည့်ရင်.. ပြန်ပို့..
နောက်တခုက.. ပြည်တွင်းလည်း ပိုက်စိတ်တိုက်ပြီး လိုက်စစ်..
အလုပ်တွေ..လယ်တွေ.. ယာတွေ.. အိမ်တွေတအိမ်တက်ဆင်း.. မှတ်ပုံတင်စစ်..နောက်ကြောင်းလိုက်..
မပို့ခင်စပ်ကြား.. ကန့်မ်သွင်းထား..။ အလုပ်ခိုင်းထား..။
ICE: 3000 criminal illegal immigrants arrested | http://www.wftv.com
Apr 2, 2012 – ICE said it is staffed and funded to remove 400000 illegal immigrants from the country per year. There are more than 700000 undocumented .
ပြည်တွင်း.. လူဝင်မှုက.. မထိမ်းလို့မရဘူး…
ဒါနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး.. ကျွမ်းကျင်သူတွေ.. ယူအက်စ်မှာအများကြီးပဲ.. နိုင်ငံအဆင့်လှမ်း.. အကူအညီတောင်းလို့ရတယ်..
ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေနဲ့.. ကျုးကျော်ဝင်လာသူတွေကို.. တန်းညှိမဆက်ဆံဖို့ပဲ..
ရန်ကုန်မန္တလေးက.. မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေက.. မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ..
သူတို့နဲ့.. ခိုးဝင်သူတွေနဲ့.. ကိုးကွယ်ရာဘာသာတူနေလို့ဆိုပြီး.. တန်းသွားမညှိဖို့ပဲ..
ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်တော့ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို သနားတယ်.ကိုယ်ချင်းစာ ကျေးဇူးတင်တယ်..သဂျီးခင်ဗျ
သူတို့ တွေ ဘာအခွင့်အထူးမှ များများစားစားမရှိပဲ ၀င်လာသမျှ ကလားသခိုးတွေကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် အမိုက်ခံပြီး
တားပေးထားကြရတာ အတော် မလွယ်ဘူး
အစွန်းရောက်ခေါင်းဆောင်တွေက ငွေလမ်းခင်းပြီး စနစ်တကျ ခိုးပို့ ပြီး နယ်ချဲ့ ထားကြတာ
အခု ကုလားသထေးတွေရဲ့ ငွေကြေးသြဇာအောက်မှာ အကုန် ပိနေပြီ
အစိုးရမင်းတို့ဖိဖိစီးစီး နဲ့ ရခိုင်ပြည်ကို ကာဗာ လုပ်သင့်နေပြီ..
အချိန်မီ မလုပ်နိုင်ရင် ကလားပိုင် ပြည်ဆိုပြီးသာ ရေစက်ချပြီး ပေးလိုက်ပေတော့ဗျို့ 
သူကြီးလဲ သိမှာပါ ခိုးဝင်လာတာက ကြာနေပါပြီ..အရင် ခရီးသည်တင် ကားသမားတွေ ပြဿနာ တက်တာ အဲဒီကိစ္စ အများဆုံးဖြစ်နိင်တယ် ..ရခိုင်မှာ တခေါက်နားတယ် မန်တလေးကိုသွားတယ် ရန်ကုန်ကိုလာတယ် ထိုင်းကို မြ၀တီလမ်းကနေ ကူးတယ် မော်လမြိုင်မှာလဲ မှတ်ပုံတင်တွေ ရနေကြပြီလို့မွန်ပြည်နယ်သားတယောက်က ပြောပြတယ် ..ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ ပြည်သူတွေ သိရမှာပါ မီးမရလို့ ၅ ထောင်တန်ဖုန်း လိုချင်လို့ ရခိုင် ကထွက်တဲ့ ဂစ် ရခိုင်ပြည်မှာ သုံးစွဲ ဖို့ လုပ်ရင်း အခုလက်ရှိ ခြံစည်းရိုး ခတ်တာ မပြီးသေးဘူး ထင်ပါတယ် ..ခြံစည်းရိုး ခတ်တုံး စစ်သားတွေ မုဒိန်းကျင့်ပါတယ် ဘာဖြစ်ပါတယ် ညာဖြစ်ပါတယ် အော်နေကြတယ် …..
အခုအချိန်မှာ ရိုဟင်ဂျာဘက်က ၀င်ပြောတဲ့ ၀င်နာတဲ့ လူ ၊ အဖွဲ့အစည်း တွေကို မှတ်သားထားကြပါ…။
ဒါဟာ မျက်နှာဖုံးဆွဲချွတ်လိုက်တဲ့ အခိုက်အတန့်ပဲ…။
ကျုပ်တို့ ခဏခဏ နွားကျ မခံနိုင်ဘူး…။
silver hero says:
ဦးဦးပါလေရာ မန့် ထားတဲ့ စာ က အဓိပ္ပါယ် အရမ်းရှိတယ်နော် ။
ကျုပ်တော့ မှတ်ထားလိုက်ပြီ ။
ဒေးဗျစ် ရေ သတင်းအတွက် ကျေးဇူးပါနော
bravo kiss says:
သူများနိုင်ငံမှာ ခိုးဝင်တာ တွေကို ကြပ်မတ် တားမြစ်နေပေမယ့် ကိုယ့် နိုင်ငံ မှာတော့ လ၀က က လူတွေက စီးပွားဖြစ်ကို ခိုးသွင်းနေ တော့ တာ သူတို့ ပါ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ ရမယ်။
သူများနိုင်ငံက သူများလူမျိုးတွေက ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးကို နိုင်ငံထဲထိလာပြီးစော်ကားနေတာ မြင်ရတော့ တော်တော်ခံစားရတယ်ဗျာ တရုတ်ကတစ်မျိုး ကုလားက တစ်မျိုးနဲ့ အေးဝတီဆိုတဲ့လူ ပျောက်နေပါလား ပို့စ်မတင် မန့်တာတွေမတွေ့ရ မြန်မာတွေစော်ကားခံရတော့ တော်တော်လေးကြေနပ်သွားပြီနဲ့တူတယ်
a me says:
ပြန်ရှို့ရမှာပေါ့ ငြိမ်နေလို့ ဖြစ်ပါ့မလား
kalar lay says:
ဟေ့ရောင်တွေမင်းတို့က ကုလားလို့ပြောရအောင် မင်းတို့ကဘယ်လောက်တောင်အဆင့်ရှိလို့လဲ။မင်းတို့ကိုမေးရအုံးမယ် …မင်းတို့လက်ရှိရှီခိုးနေတဲ့ဘုရားကဘယ်တိုင်းပြည်ကလာတာလဲရောမင်းတို့သိရဲ့လား။ နောက်မင်းတို့အများဆုံးစားသောက်မျိုဆို့နေတာကရောဒီကုလားတွေဆီကနေအများဆုံးရတဲ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့ပဲ။နောက်တစ်ခု ဘာမဟုတ်တဲ့မုဒိန်းမှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ(10)ဦးကိုလည်းသတ်ခဲ့တယ်။ဘာလဲ အဲ့ဒီမုဒိန်းမှု့ကို ကုလားကလုပ်လို့လား။ဒီလိုဆိုရင်မေးရအုံးမယ် (လသာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ 16 နှစ်အရွယ်သမီးကို မုဒိန်းကျင့်တာဘယ်သူလဲ?… ဖအေက သမီးကိုမုဒိန်းကျင့်တာကရောဘယ်သူလဲ….?ဂျပန် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုမုဒိန်းကျင့်တာကရောဘယ်သူလဲ….?နောက်ဆက်တွဲမုဒိန်းမှုအများဆုံးကိုလိုက်ပြီးဆုံစမ်းကြည့်လိုက် စမ်းပါကွာ ဘယ်သူ့လက်ချက်အများဆုံးလဲလို့…? မင်းတို့မသေမချင်းမှတ်ထား ကုလားမုန်းရင် ဘုရားမုန်းတာနဲ့တူတူပဲကွ………….။
SkyHeart WinKo says:
ပါတီတွေလည်းခွပ်၊လူမျိုးတွေလည်းခွပ်၊အဖွဲ့တွေလည်းခွပ်၊မိသားစုလည်းခွပ် ဒိုင်လုပ်သူကပျော်လိုက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း ဒို့ဗိုလ်ချူပ်ပြောသလို ကြက်နိုင်ငံကြီးဖြစ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်။